I-Vineyard Yurt - I-Airbnb
White Salmon, Washington, i-United States
Itende ibungazwe ngu-Jocelyn
U-Jocelyn Ungumbungazi ovelele
Itholakala endaweni ephansi ye-Mt. Adams, Blue Elk Farms kanye neVineyard iyindawo yemvelo engavamile, engasese, futhi emangalisayo e-Columbia Gorge ukuze ubaleke. Jabulela izivini ezinhle ezisebenzayo kanye nokubukwa kwezintaba okubekwe endaweni ebabazekayo yamagquma alandelanayo kanye nehlathi elinokuthula elisenyakatho-ntshonalanga. Indawo yethu iseduze nemisebenzi elungele umndeni futhi ilungele imibhangqwana, abantu abazihambela bodwa, imindeni (enezingane), nabangane abanoboya (izilwane ezifuywayo).
Uzoyithanda indawo yami ngenxa yokubuka, indawo, indawo ezungezile, nezindawo ezingaphandle.
Sitholakala emizuzwini embalwa ukusuka kwenye ye-kayaking ehamba phambili e-Pacific Northwest ku-White Salmon River. Silibiza ngothando izwe lothingo nezimpophoma! Le ndawo idume ngokuqwala izintaba okumangalisayo, ukudoba ama-salmon, ukunambitha iwayini, i-kiteboarding, ukuntweza emoyeni, ukunambitha ubhiya ne-cider, ukukha izithelo nokunye okuningi. Kuyipharadesi lomuntu ongaphandle othanda umoya.
Zizwe ukhululekile ukusithinta ngemibuzo mayelana nezinto ezingcono kakhulu zokwenziwa zesizini!
4.87 out of 5 stars from 265 reviews
4.87 · 265 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-265
IBlue Elk Farms iyisivini esisebenzayo nendawo yomcimbi. Sihlala futhi endaweni (kude ne-yurt). Ngitholakala kakhulu nge-imeyili nangombhalo nakuba singase sidluliselane ngezikhathi ezithile ngomndeni wethu wansuku zonke nemisebenzi yasepulazini. Sihlonipha futhi silindele ubumfihlo kuwo wonke umuntu!
IBlue Elk Farms iyisivini esisebenzayo nendawo yomcimbi. Sihlala futhi endaweni (kude ne-yurt). Ngitholakala kakhulu nge-imeyili nangombhalo nakuba singase sidluliselane ngezikhath…
Hlola ezinye izinketho ezise- White Salmon namaphethelo